Dian’ilay Mpanao Gazety Olo-tsotra Ao Anatin’ny Tanànan’i Aleppo Ravan’ny Daroka Baomba An’habakabaka · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 08 Desambra 2015 7:48 GMT
Rami Jarrah, mpikatroka politika Syriana sady olo-tsotra mpanao gazety. Sary: Courtesy Rami Jarrah
Ity lahatsoratra nosoratan'i Joyce Hackel ho an'ny The World ity dia nivoaka voalohany tao amin'ny PRI.org tamin'ny 2 Desambra 2015, ary navoaka eto indray noho ny fifanarahana fifampizarana votoaty.
Feo tsy mba fandre ao Aleppo, tanàna Syriana ravan'ny ady i Rami Jarrah
Syriana mpanao gazety olo-tsotra izy, manadihady ny vokatry ny daroka baomba an'habakabaka eo amin'ny olom–pirenena. Midika izany matetika fa mihazakazaka mijery ny voka-dratsy ny daroka baomba izy, tahaka ny nataony indray andro raha nihaona tamina raim-pianakaviana raiki-tahotra, mitaintainana mitady ny hava-tiany izy.
“Hoy izy hoe ‘Aiza ny zanakolahy, aiza ny zanako, ny zanakolahy Hassan?'” hoy i Jarrah, ao amin'ny tetikasan-gazety median'olo-tsotra ANA.
Nahatakatra avy hatrany ny mpitazana tahaka an'i Jarrah fa nanjavona nandritra ny daroka baomba an'habakabaka Rosiana ny zanany sy ny vadin'ilay lehilahy.
“Nanohy niantsoantso ilay lehilahy , ‘ tsy eto ny ISIS! Nahoana no mitranga aminay izao?’ hoy i Jarrah nanampy. “Nosintoniny ny zananilahy iray hafa, ary nofihininy , nofihininy manodidina no sady nilaza izy hoe: Te-hamono azy koa ianao? ‘”
Britanika sady Syriana i Jarrah. Nandositra an'i Damaskosy izy tamin'ny 2011, ary nifindra any Ejipta aloha ary avy eo any Torkia. Ary ao Aleppo ankehitriny, mamoaka tantara mombamomba ny mponina izy.
“Olombelona izy ireo. Miaina tahaka antsika izy ireo, mitia tahaka antsika izy ireo. Te hanao zavatra mitovy amin'ny ataonao ihany koa,” hoy izy.
Niaiky avy hatrany i Jarrah fa mpanara-maso tsy mitanila izy.
“Raha lazaina ny marina, noho ny antony ara-pikatrohana no nanoratako isan'andro amin'ny misy ahy,” hoy izy. “Amin'ny maha mpikatroky ny fampitam-baovao ahy, ny zavatra kendreko dia ny hampisy vaovaon'ny manohitra izay asongadin'ny fitondrana Syriana sy ny mpifanandrina aminy.”
Tsy misy ny mpanao gazety vahiny ao Aleppo, ary mitandrina ny fiarovany manokana ihany koa i Jarrah.
“Zavatra tokony ahiana io. Manana finday miafina ny ISIS. Efa tsy ao anatin'ny bokin'ny tsara aho amin'izy ireo,” hoy izy nanamarika. “Manana mpanao gazety miasa ho anay izay nalaina an-keriny tamin'ny volana Oktobra 2013 izahay, ary tsy nahita azy intsony izahay nanomboka teo.”
Manaiky izy fa mety manova azy ny fotoana andalovany ao Aleppo.
“Tsy mpino mihitsy aho. Na izany aza, fantatro ny antony mahatonga ny olona mitady inoana rehefa tratran'ireo toe-javatra ireo,” hoy izy. “Nisy olona nanontany ahy indray andro, ‘Misy fialokalofana ve ao Aleppo ary mampiasa azy ireo ve ny olona?’ Vondrona mpanao fikarohana no nanontany izany. Ary hoy aho namaly: ‘Eny, raha misy fialokalofana an'arivony, andeha lazaina hoe fialofana eo ambanin'ny tranobe tsirairay, tsy mino aho fa hankao amin'izy ireo ny olona.’ Satria naharitra ela loatra ity ady ity ka sarotra ho an'ny olona ny hifankazatra amin'ny toe-draharaha, “hoy izy, nampiany hoe:”Manahy aho fa ho zatra mahita ra mandriaka. Manahy ny amin'izany aho.”